Kedu ụzọ kachasị mma ị ga-esi nweta Dolinks backlinks ruo 2019?
Mgbe ọ na-abịa SEO, mmadụ nwere ike ịchọta ọtụtụ ememme kachasị eme na ụfọdụ okwu ndị na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ. N'ezie, mpaghara nke oge a na-achọ Nchọpụta Nchọpụta Ọmụma na-agbanwe mgbe niile na-agbalị ịmegharị iji jiri nwayọọ nwayọọ na-agbanwe ma gbanwee Google isi isi algorithm.Ka o sina dị, e nwere ụfọdụ aghụghọ na omume ndị gosipụtara arụmọrụ site na afọ ndị na-adịbeghị anya - echere m na enwere ike ịtụ anya na ha ga-ejigide ike mbụ ha, ma ọ dịkarịa ala n'ọdịnihu.Ma ị bụ onye ziri ezi - enwere ụzọ dị mma iji nweta DoFollow backlinks ruo 2019. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị niile gbasara blog na-ekwu okwu dị ka pro iji nweta ndị azụlinks na DoFollow na nloghachi. Ya mere, ka anyi malite.
Blog Na-ekwu banyere
A maara na a maara nke ọma mmekọrịta ụlọ ọrụ a dị ka ọ bara uru maka iwu DoLollow backlinks na 2019, dịka ọ bụ n'oge. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịmara iji usoro a dị egwu maka ụlọ njikọ.
Nzọụkwụ 1: Ịmepụta Ntọala Kwesịrị Ekwesị
Nke mbụ, ana m atụ aro ka ịmalite site na isi okwu ndị dị na isi na mkpịsị okwu. Cheta - inwe oke nnwere onwe maka isiokwu gị bụ ihe kachasị mkpa nke na-eme ka ọdịnaya gị pụta maka ọchụchọ ntanetị. Ee, ịde ederede dị ukwuu na akara azụmaahịa PR kachasị mma na-ada ụda. Mana ihe niile ga-eme ka uche gwụ ma ọ bụrụ na ndị ezigbo ọrụ na-achọ gị ajụjụ ndị dị mkpa dị mkpa.
Ụkwụ na Ụkwụ 2: Jiri Ozi Bipụtara Biputere Ighata Njikọ
Ozugbo i nwere isiokwu ndị kwesịrị ekwesị iji malite, M ga-aga maka ikwu okwu banyere ụfọdụ blọọgụ kpọmkwem maka isi isiokwu gị ma ọ bụ ahịa niche. N'ụzọ dị otú a, m na-akwado iji CommentLuv ngwa mgbakwunye, usoro na-ekwurịta okwu na-adaba adaba nke a maara nke ọma n'etiti SEO na ọkachamara webmasters.Ekwenyere m na usoro a dị oke egwu ga-adị irè maka iwu DoLollow backlinks ọbụna n'afọ 2019. Ihe niile na-arụ ọrụ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke onwe gị, n'ihi ya ị ghaghị inwe nsogbu na-enyere onye inyeaka a aka.
Nzọụkwụ 3: Idebe Comments Ezigbo
Ma lee, anyị na-abanye nkwụsịtụ dị nro. Ekwuru m na a ghaghị ịdọ aka ná ntị - ihe ahụ bụ na ndị na-ede blọgụ nwere ike ịghọta nke ọma na ị bụ naanị okwu ntụgharị iji nweta ihe ndabere backlinks na DoFollow. Ọ bụ ya mere òkè nke ọdụm nke akụkọ gị ndị na-adịbeghị anya nwere ike ịdọgbuo ya na obere oge. Iji gbochie ihe omume dị otú ahụ jọgburu onwe ya, ana m akwado na ịdebe ihe niile ị kwuru n'eziokwu. Echere m ebe a, ị ga - enwerịrị akwụkwọ nlele abụọ maka mkparịta ụka ọ bụla tupu ya agaa. Naanị lezie anya na ị ga - etinyekwu oge iji nweta ihe niile - gụọ isiokwu ahụ nke ọma, tinyekwa naanị okwu ndị nwere ezi uche na ọ bụghị nanị na ị nwere uche zuru oke kama ọ ga - ewetara ndị na - agụ akwụkwọ ezigbo uru.
Na-eme nke a, egbulabigala ókè site na ịmepụta ọtụtụ ederede blog maka backlinks, ọ gwụla ma ịchọrọ ịwelite ọkọlọtọ ọkọlọtọ na search engine nke Google. Zere ile anya na ị na-enyo enyo na arụmọrụ ọ bụla na-ekwekọghị n'okike. N'ikpeazụ, echefula na e nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ dị ka ịdebe akwụkwọ ndekọ ma ọ bụ nweta backlinks na forums. Ụzọ ndị a bara uru nke njikọ ụlọ njikọ nwere ike ịtụ anya na ha ga-arụ ọrụ ha maka ịmepụta ihe dị mkpa na DoFollow backlinks ọbụna rue 2019 Source .